July 2018 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Mobile Tutorials နည်းလမ်းများ
Maung Pauk at 4:35:00 PM 0
Lenovo Downloader Tool ဟာ Qualcomm သုံးထားတဲ့ Lenovo Smartphone တွေသာမက အခြား Qualcomm Smartphone တော်တော်များများတွေကို Firmware Flash ရာမှာ တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. Lenovo Downloader Tool ကိုအသုံးပြုပြီး Qualcomm Smartphone နဲ့ Tablets တွေကို Flash တဲ့နည်းလမ်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
သတိ: Lenovo Downloader Tool နဲ့ Firmware Flash ပြီးရင် Data အကုန်ပျက်ပါမယ်..
Step 1: ပထမဆုံး Qualcomm Driver ကို Download လုပ်ပြီး ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်လိုက်ပါ.. ကွန်ပျူတာကို Reboot လုပ်ပါ.. ( Qualcomm Driver ကို Install လုပ်ပြီးသားကွန်ပျူတာတွေကတော့ ဒီအဆင့်မလိုတော့ပါ .)
ပထမဆုံး Qualcomm Driver ကို Download လုပျပွီး ကှနျပြူတာမှာ install လုပျလိုကျပါ.. ကှနျပြူတာကို Reboot လုပျပါ.. ( Qualcomm Driver ကို Install လုပျပွီးသားကှနျပြူတာတှကေတော့ ဒီအဆငျ့မလိုတော့ပါ .)
Step 2: Lenovo Downloader Tool ကို Download လုပ်.. ဖြည်ချပြီး AcomDLoader.exe ကို Run ပါ.
Lenovo Downloader Tool ကို Download လုပျ.. ဖွညျခပြွီး AcomDLoader.exe ကို Run ပါ.
Step 3: Load Button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး Firmware Folder (Firmware ကို Download လုပ်ပြီးဖြည်ချပြီးသား Folder) ကိုရွေးပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ..
Load Button ကိုတဈခကျြနှိပျပွီး Firmware Folder (Firmware ကို Download လုပျပွီးဖွညျခပြွီးသား Folder) ကိုရှေးပွီး OK ကိုနှိပျပါ..
Step 4: Start Button ကိုနှိပ်ပါ..
Start Button ကိုနှိပျပါ..
Step 5: ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပြီး Volume UP နဲ့ Volume Down Button ကိုတွဲဖိထားရင်း ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပါ..
ဖုနျးကို ပါဝါပိတျပွီး Volume UP နဲ့ Volume Down Button ကိုတှဲဖိထားရငျး ကှနျပြူတာနဲ့ခြိတျပါ.
Step 6: ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာက သိပြီဆိုရင် Lenovo Downloader Tool က အလိုအလျောက် Flash ပေးပါမယ်...
ဖုနျးကို ကှနျပြူတာက သိပွီဆိုရငျ Lenovo Downloader Tool က အလိုအလြောကျ Flash ပေးပါမယျ...
Step 7: မိနစ်နည်းနည်းကြာလို့ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အခါ အစိမ်းရောင် စာလုံးလေးနဲ့ Passed စာတမ်းပေါ်လာရင် အဆင်ပြေပါပြီ...
မိနဈနညျးနညျးကွာလို့ လုပျငနျးစဉျပွီးဆုံးတဲ့အခါ အစိမျးရောငျ စာလုံးလေးနဲ့ Passed စာတမျးပျေါလာရငျ အဆငျပွပေါပွီ...
ကဲ.. Lonovo Downloader Tool ကို အသုံးပြုပြီး Qualcomm Smartphone တွေ Tablet ကို Firmware Flash တာ အောင်မြင်ပါပြီ...
Maung Pauk at 12:51:00 PM 0
Android Tool Computer software Tool
Mediatek သုံးထားတဲ့ Smartphone တွေကို Firmware Flash တဲ့ အကောင်းဆုံး Tool တစ်ခုပါ..
Mediatek သုံးထားတဲ့ Smartphone တှကေို Firmware Flash တဲ့ အကောငျးဆုံး Tool တဈခုပါ..
Download SP Flash Tool v5.1824 : 53.67 MB
SPD Upgrade Tool or ResearchDownload Tool v.R19.0.0001
Maung Pauk at 11:27:00 PM 0
အရင် ဗားရှင်းဟောင်းတွေတုန်းက ResearchDownload Tool လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ SPD Upgrade Tool (SpreadTrum flash tool)ဟာ SpreadTrum တွေသုံးထားတဲ့ Smartphone တွေအတွက် .pac Firmware တွေကို Flash တဲ့ Tool ဖြစ်ပါတယ်.. .PAC Firmware တွေသာမက .P5C Firmware တွေကိုပါ Flash ပေးနိုင်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးထွက် v.R19.0.0001 ကို ရယူနိုင်ပါပြီ...
အရငျ ဗားရှငျးဟောငျးတှတေုနျးက ResearchDownload Tool လို့ချေါခဲ့တဲ့ SPD Upgrade Tool (SpreadTrum flash tool)ဟာ SpreadTrum တှသေုံးထားတဲ့ Smartphone တှအေတှကျ .pac Firmware တှကေို Flash တဲ့ Tool ဖွဈပါတယျ.. .PAC Firmware တှသောမက .P5C Firmware တှကေိုပါ Flash ပေးနိုငျပါတယျ.. နောကျဆုံးထှကျ v.R19.0.0001 ကို ရယူနိုငျပါပွီ...
Download : 2.2 MB
Latest Version Download Mediafire Link
Android Tool Tool
Lenovo Downloader Tool ဟာ Qualcomm သုံးထားတဲ့ Lenovo Smartphone တွေသာမက အခြား Qualcomm သုံးထားတဲ့ Smartphone တွေအတွက်ပါ Stock Firmware တွေ တင်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. ResearchDownload Tool (SPD Upgrade Tool) နဲ့ ဆင်တူပြီး Function တွေကိတော့ ကွဲပြားပါတယ်.. Download Setting ကနေ eMMC Programmer, Raw Programmer နဲ့ Chipset Number တွေကိုပါ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးထွက် v1.03 ကို ရယူနိုင်ပါပြီ...
Lenovo Downloader Tool ဟာ Qualcomm သုံးထားတဲ့ Lenovo Smartphone တှသောမက အခွား Qualcomm သုံးထားတဲ့ Smartphone တှအေတှကျပါ Stock Firmware တှေ တငျတဲ့အခါမှာ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ.. ResearchDownload Tool (SPD Upgrade Tool) နဲ့ ဆငျတူပွီး Function တှကေိတော့ ကှဲပွားပါတယျ.. Download Setting ကနေ eMMC Programmer, Raw Programmer နဲ့ Chipset Number တှကေိုပါ ပွောငျးလဲပဈနိုငျပါတယျ.. နောကျဆုံးထှကျ v1.03 ကို ရယူနိုငျပါပွီ...
Download Lenovo Downloader Tool v1.03 : 3.3 MB
Check All Version
Maung Pauk at 6:12:00 PM 0
4K Ultra HD Blu-ray Movie တွေကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ DVDFab UHD Creator Software ဖြစ်ပါတယ်.. Video Editing ကို အဆင့်မြင့်မြင့် Professional ဆောင်ရွက်နေသူတွေအတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..
DVDFab ရဲ့ 10 နှစ်မြောက်အဖြစ် Giveaway ပေးလာတာကြောင့် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
email ဖြည့်ပြီး Send ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ... email ထဲကို အချက်အလက်တွေ ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်..
1. Install the DVDFab program on the DVD of PC Magazine Issue or http://de.dvdfab.cn/download.htm.
2. Start DVDFab 10, click "Enable" at the welcome screen.
3. Enter the following login information and then click "Enable."
ဖြစ်ပါတယ်.. ၅၉ယူရိုတန် DVDFab UHD Creator ကို 30.8.2019 ထိ တရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ အလကားသုံးနိုင်ပါပြီ...
4K Ultra HD Blu-ray Movie တှကေို ဖနျတီးနိုငျတဲ့ DVDFab UHD Creator Software ဖွဈပါတယျ.. Video Editing ကို အဆငျ့မွငျ့မွငျ့ Professional ဆောငျရှကျနသေူတှအေတှကျ သိပျကောငျးတဲ့ Software ဖွဈပါတယျ..
DVDFab ရဲ့ 10 နှဈမွောကျအဖွဈ Giveaway ပေးလာတာကွောငျ့ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ..
email ဖွညျ့ပွီး Send ကိုနှိပျပေးလိုကျပါ... email ထဲကို အခကျြအလကျတှေ ပို့ပေးပါလိမျ့မယျ..
ဖွဈပါတယျ.. ၅၉ယူရိုတနျ DVDFab UHD Creator ကို 30.8.2019 ထိ တရားဝငျလိုငျစငျနဲ့ အလကားသုံးနိုငျပါပွီ...
As movie studios are getting more and more excited about offering 4K Ultra Blu-ray, the demand for 4K UHD authoring tools at consumer level is increasing. Of course, these commercial companies do not offer these productions to the public, which means that authoring tools for the home are still very rare. However, with the release of the DVDFab UHD Creator,asolution has now been found. It's both professional and easy to use. This UHD Creator software can create premium 4K Ultra HD Blu-ray movies using digital video including 4K video with or without HDR10 / Dolby Vision content. The created 4K Blu-ray are on the same level as the studio and fully compatible with standalone 4K UHD Players.
Audio Softwares Computer software Editor Giveaway
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ editing, mixing,mastering လုပ်ရာမှာ Professional ထိ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ CyberLink AudioDirector7ကို LE Giveaway ပေးနေတာတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
နာမည်နဲ့ email ဖြည့်ပြီး submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. လိုင်စင်ကီးချက်ချင်းပေးပါလိမ့်မယ်.. နောက်ထပ် ၄ ရက်နဲ့ ၂၁ နာရီသာ ပေးတော့မှာမို့ ခုပဲ သွားယူလိုက်ပါ..
ဒါမှမဟုတ် အောက်က ကီးတစ်ခုခုကို အသုံးပြုလိုက်ပါ.. Download File ထဲမှာ ကျနော်တောင်းထားတဲ့ ကီးကိုလည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်...
License Key: LE557-UTGDM-Z9WXE-M2BT2-BNE77-QN8EW
License Key: LEX6T-D4U7U-BZD9Y-QDKKH-DNXGF-U3RZP
အသံပိုငျးဆိုငျရာ editing, mixing,mastering လုပျရာမှာ Professional ထိ ကိုငျတှယျဆောငျရှကျနိုငျတဲ့ CyberLink AudioDirector7ကို LE Giveaway ပေးနတောတှလေို့ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ..
နာမညျနဲ့ email ဖွညျ့ပွီး submit ကိုနှိပျလိုကျပါ.. လိုငျစငျကီးခကျြခငျြးပေးပါလိမျ့မယျ.. နောကျထပျ ၄ ရကျနဲ့ ၂၁ နာရီသာ ပေးတော့မှာမို့ ခုပဲ သှားယူလိုကျပါ..
ဒါမှမဟုတျ အောကျက ကီးတဈခုခုကို အသုံးပွုလိုကျပါ.. Download File ထဲမှာ ကနြျောတောငျးထားတဲ့ ကီးကိုလညျး ထညျ့ပေးလိုကျပါတယျ...
CyberLink AudioDirector7LE : 177.9 MB
Computer software Giveaway Programming Softwares Web development
Maung Pauk at 4:06:00 PM 0
CodeLobster PHP Edition ဟာ PHP websites, such as Drupal CMS, Joomla CMS, Smarty template engine, JQuery library, CodeIgniter framework, CakePHP framework, Laravel framework, Symfony framework, Yii framework နဲ့ WordPress blogging platform တွေအတွက်
CodeLobster PHP Edition ဟာ PHP websites, such as Drupal CMS, Joomla CMS, Smarty template engine, JQuery library, CodeIgniter framework, CakePHP framework, Laravel framework, Symfony framework, Yii framework နဲ့ WordPress blogging platform တှအေတှကျ
CodeLobser PHP Edition offersabunch of useful features like effective auto-complete, code highlighting, and context and dynamic help. At the same time, you have access toarespectable range of Plugins to choose from. As such, the IDE scores highly when it comes to compatibility with other PHP platforms.
Home Page : http://www.codelobster.com/
CodeLobster PHP Edition LITE Free Giveaway.exe : 8.29 MB
Computer software Install/Uninstall လုပ်နည်းများ Uninstaller နည်းလမ်းများ
Maung Pauk at 1:44:00 PM 0
Computer က Software တွေကို ဒီအတိုင်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါ Registry ထဲမှာ၊ အခြား မှတ်သားထားတဲ့နေရာတွေမှာ အချက်အလက်အမှတ်အသားတွေကျန်နေတတ်ပါတယ်.. Windows ကို Restart လုပ်လိုက်ပေမယ့် အချို့ Software တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ Registry ထဲမှာ ရှိနေတုန်းပါပဲ..
ဒီတော့ ဘာအချက်အလက်မှ မကျန်အောင် Uninstall လုပ်ဖို့အတွက် Third-party Software တစ်ခုခုသုံးနိုင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တော့ iObit Uninstaller ကို အသုံးပြုပြီး Uninstall လုပ်ပြသွားပါမယ်...
<Computer က Software တှကေို ဒီအတိုငျး Uninstall လုပျတဲ့အခါ Registry ထဲမှာ၊ အခွား မှတျသားထားတဲ့နရောတှမှော အခကျြအလကျအမှတျအသားတှကေနျြနတေတျပါတယျ.. Windows ကို Restart လုပျလိုကျပမေယျ့ အခြို့ Software တှရေဲ့ အခကျြအလကျတှဟော Registry ထဲမှာ ရှိနတေုနျးပါပဲ..
ဒီတော့ ဘာအခကျြအလကျမှ မကနျြအောငျ Uninstall လုပျဖို့အတှကျ Third-party Software တဈခုခုသုံးနိုငျပါတယျ.. ကြှနျတျောတော့ iObit Uninstaller ကို အသုံးပွုပွီး Uninstall လုပျပွသှားပါမယျ...>
1. iObit Uninstaller ကို Run ပြီး ကိုယ် Uninstall လုပ်ချင်တဲ့ Software ကိုရွေးကာ ညာဘက်က အမှိုက်ပုံးပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ..
<1. iObit Uninstaller ကို Run ပွီး ကိုယျ Uninstall လုပျခငျြတဲ့ Software ကိုရှေးကာ ညာဘကျက အမှိုကျပုံးပုံလေးကိုနှိပျပေးလိုကျပါ..>
2. တကယ်လို့မှားဖျက်မိခဲ့ရင် System Restore ပြန်လုပ်တဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင် Createarestore point ကိုအမှန်ခြစ်ထားနိုင်ပါတယ်.. နောက်တစ်ခုက အချက်အလက်တွေကို အလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်အောင် Automatically remove ကိုအမှန်ခြစ်ထားနိုင်ပါတယ်.. ဒါလည်း လုပ်ချင်ရင်လုပ်ပေါ့.. Office Suit ထဲက Software တွေလိုမျိုး အချို့ Software တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်နေတတ်ပါတယ်.. အဲဒီခါကျရင် Automatically remove ကို အမှန်မခြစ်သင့်ပါဘူး.. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Automatically remove လုပ်သွားတဲ့အခါ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆက်စပ် Software တွေ အလုပ်မလုပ်တော့လို့ဖြစ်ပါတယ်... ကျနော်ကတော့ Automatically remove ကို မရွေးခဲ့ပါဘူး.. ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Uninstall ကိုနှိပ်ပါ..
<2. တကယျလို့မှားဖကျြမိခဲ့ရငျ System Restore ပွနျလုပျတဲ့အခါ အဆငျပွအေောငျ Createarestore point ကိုအမှနျခွဈထားနိုငျပါတယျ.. နောကျတဈခုက အခကျြအလကျတှကေို အလိုအလြောကျဖကျြပဈနိုငျအောငျ Automatically remove ကိုအမှနျခွဈထားနိုငျပါတယျ.. ဒါလညျး လုပျခငျြရငျလုပျပေါ့.. Office Suit ထဲက Software တှလေိုမြိုး အခြို့ Software တှဟော တဈခုနဲ့တဈခု ဆကျစပျနတေတျပါတယျ.. အဲဒီခါကရြငျ Automatically remove ကို အမှနျမခွဈသငျ့ပါဘူး.. ဘာလို့လညျးဆိုတော့ Automatically remove လုပျသှားတဲ့အခါ ကနျြခဲ့တဲ့ ဆကျစပျ Software တှေ အလုပျမလုပျတော့လို့ဖွဈပါတယျ... ကနြျောကတော့ Automatically remove ကို မရှေးခဲ့ပါဘူး.. ရှေးခယျြပွီးပွီဆိုရငျတော့ Uninstall ကိုနှိပျပါ..>
3. Uninstall လုပ်နေပါပြီ.. ( အချို့ Software တွေကတော့ Uninstall လုပ်ဖို့ သီးခြား Dialog Box တွေ တက်လာတတ်ပါတယ်.. ဖေါ်ပြထားတဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး နှိပ်သွားပေါ့.. )
<3. Uninstall လုပျနပေါပွီ.. ( အခြို့ Software တှကေတော့ Uninstall လုပျဖို့ သီးခွား Dialog Box တှေ တကျလာတတျပါတယျ.. ဖျေါပွထားတဲ့ အခွအေနကေိုကွညျ့ပွီး နှိပျသှားပေါ့.. )>
4. Uninstall လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးတဲ့အခါ Windows Registry တွေ၊ Shared File တွေ၊ App Data ဖိုင်တွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ ပြပါလိမ့်မယ်.. အခြား Software တွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုမရှိတဲ့ Software ကိုဖျက်မှာဆိုတော့ အောက်နားက Select All နဲ့ Shared Files တွေကို အမှန်ခြစ်ပြီး Delete ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.. ( ဆက်စပ်တဲ့ Software အုပ်စုထဲကဟာကို ဖျက်မယ်ဆိုရင်တော့ သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး ချန်ခဲ့သင့်တာတွေကို အမှန်ခြစ်လိုက်ဖြုတ်ပေးလိုက်ရပါမယ်.. )
<4. Uninstall လုပျငနျးစဉျပွီးတဲ့အခါ Windows Registry တှေ၊ Shared File တှေ၊ App Data ဖိုငျတှေ ရှိနသေေးတယျဆိုတာ ပွပါလိမျ့မယျ.. အခွား Software တှနေဲ့ ဆကျစပျမှုမရှိတဲ့ Software ကိုဖကျြမှာဆိုတော့ အောကျနားက Select All နဲ့ Shared Files တှကေို အမှနျခွဈပွီး Delete ကိုနှိပျပေးလိုကျရုံပါပဲ.. ( ဆကျစပျတဲ့ Software အုပျစုထဲကဟာကို ဖကျြမယျဆိုရငျတော့ သသေခြောခြာ ကွညျ့ပွီး ခနျြခဲ့သငျ့တာတှကေို အမှနျခွဈလိုကျဖွုတျပေးလိုကျရပါမယျ.. )>
iObit Uninstaller 7.5 : 14.67 MB
FRP Removel Solution Phone Application Samsung
Maung Pauk at 4:18:00 PM 0
အ၇င်ဆုံး Combination ကိုဒေါင်းပါ
AP ဆို AP
BL ဆို BL
CP ဆို CP
CSC - CSC မဟုတ်ပါဘူး Home_CSC ကိုရွေးပေးပါ..
Firmware ရေးသွားလိ့မ့်မယ် Hidden ရောက်ရင် Fail ပါပြီ..
Download Mode ပြန်ဝင် BL လေးတခုထဲရေး..
အရငျဆုံး Combination ကိုဒေါငျးပါ
AP ဆို AP
BL ဆို BL
CP ဆို CP
CSC - CSC မဟုတျပါဘူး Home_CSC ကိုရှေးပေးပါ..
Firmware ရေးသှားလိ့မျ့မယျ Hidden ရောကျရငျ Fail ပါပွီ..
Download Mode ပွနျဝငျ BL လေးတခုထဲရေး..
Credit : MPPG
Download Combination Files : 1.3 GB
Download Firmware File : 2.6 GB